Apple inogadzira chiteshi chekubatsira paYouTube | IPhone nhau
Apple inogadzira chiteshi chekubatsira paYouTube
Apple yakapa nhanho kumberi mune yako nzira yekutaurirana pamwe nemushandisi. Munguva pfupi yapfuura, pakutanga kwegore ra2016, iyo Cupertino-yakavakirwa kambani yakavhura account yeTwitter kutsigira vatengi, ichipindura mibvunzo yevatengi uye neapo kutumira tweet mazano nezve iOS. Izvozvi yakawedzera kusvika ku chiteshi chakatsaurirwa kubatsira uye kutsanangura zvinhu kune vashandisi vane Apple Tsigira YouTube.
Iyi YouTube chiteshi ine mavhidhiyo ari tutorials ane hukuru mhando hwehunyanzvi Ivo vanotsanangura ese marudzi ese eIOS maficha, kubva maitiro ekuchinja yako Wallpaper kuti ujekese nhoroondo yako yekufona.
Vhidhiyo yega yega pane yeYouTube chiteshi inoratidza ruoko rwemunhu kuratidza nhanho imwe neimwe yemaitiro akatsanangurwa, pamwe nemapoinzi ebara pachiratidziro kusimbisa mirairo. Mavhidhiyo acho zvakanyatsorondedzerwa nedzimwe tsananguro uye nguva yacho inosiyana pakati pe imwe uye maminitsi maviri, ine yakazara English zvinyorwa zvidiki zviripo kune avo vanozvida.
Iyo chiteshi ichangovhurwa nesarudzo yekutanga yemavhidhiyo gumi anofukidza mabhesiki senge kudhinda nekuvandudza iOS kune mamwe maficha akaita seMessage chat group muting uye yekubatanidza kadhi yekubatanidza. Hazvizivikanwe kuti kangani Apple ichagadzirisa chiteshi nemavhidhiyo matsva, asi kuve chiteshi chepamutemo chekubatsira mushandisi, chinhu chakajairika ndechekuti ivo vari kutumira mavhidhiyo matsva nguva diki diki uye nekuwedzera izvo zvakasiyana zvirimo.
Iyo kambani yakanga yamboburitsa zvimwe zvitsananguro nezve maitiro ekuita zvinhu zvakasiyana pane yako huru Apple bhizinesi chiteshi, senge "How to Shoot on an iPhone" camera series kana iyo iPad + iOS mavhidhiyo 11. Zvino, iwe une yakatsaurirwa YouTube chiteshi cherudzi urwu rwekubatsira uye kutsigira zvemukati mune ramangwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » Apple inogadzira chiteshi chekubatsira paYouTube
AirPods uye iPads vanokunda paCyber ​​Muvhuro
Apple inokunda patent ye TrueDepth kamera inoziva ruoko rwemaoko